Im Tee, Me Too
Kiss Me Again (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
Lovely Writer: The Series
Secret Seven (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဆယ်ကျော်သက် မေမေ: သည် စီးရီး
နင် ဘယ်သူလဲ (ထိုင်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဘယ်လှည့်ညာလှည့် (၂၀၂၀ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဘလက်လစ်တ် (ထိုင်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
သူငယ်ချင်းစည်း ၂: အန္တရာယ်တော
အမျိုးသမီးတို့ ထကြလော့: သည် စီးရီး
အမျိုးသမီးတို့ ထကြလော့: အလွန်ရှုပ်ထွေးပွေလီသော
၃ ယောက်သာ လွတ်မြောက်မည်
ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက် မီးလောင်မှု
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဥပဒေကြမ်း
မိန်းမကောင်းအင်္ဂါ (၆၄) ရပ်
သက္ကရာဇ် ၁၂၃၆ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁၃ ရက် နေ့တွင် မင်းတုန်းမင်းကြီးသည် ရတနာပုံ နေပြည်တော်သတင်းစာကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မင်းတုန်း မင်းကြီးက အမိန့်တော်တစ်ရပ်ကိုလည်း ဤသို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ သည်။ ‘‘ငါမကောင်းလျှင် ငါ့ကိုရေး၊ ငါ့မိဘုရားမကောင်းလျှင် ငါ့ ...
အေဒီ ၁⁠၁၁၃ ခုနှစ် က ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ရေးထိုးခဲ့သော မြစေတီကျောက်စာ သည် မြစေတီ ခြေရင်းနားတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ရာဇကုမာရ် ရေးထိုးခဲ့သောကြောင့် ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာဟုလည်းခေါ်သည်။ အလားတူ ကျောက်စာတစ်ခုကိုလည်း မြစေတီအနီးရှိ အဆောက်အဦးတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ၎င်းကျ ...
ကြံဖန်ကြောက်တတ်သူဟု ထင်ချင်ထင်ပါစေ။ စိုးရိမ်သင့်သောအရာကို စိုးရိမ်သင့်သောအခါများတွင် စိုးရိမ်မကင်းသောစိတ်ဖြင့် ရှောင်သင့်သည်ကို ရှောင်ပါ၊ တင်ကြိုပြုသင့်သည်ကို ပြုပါ။
မဟာရာဇဝင်ကြီး ကို ညောင်ရမ်းခေတ် ၊ သက္ကရာဇ် ၁၀၇၆-၁၀၉၅ အင်းဝဘုရင် တနင်္ဂနွေ မင်းတရားကြီး လက်ထက်တွင် ရေးသားစီရင်ခဲ့သည်။ ရေးသားသူမှာ ဦးကုလား ဖြစ်သည်။ မြန်မာစာပေ သမိုင်း တွင် အရေးပါသော ကျမ်းကြီးဖြစ်သည်။" ဦးကုလား မဟာရာဇဝင်” ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ညောင်ရမ်းခေတ ...
မဟာရာဇဝင်သစ် သည် မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တောင်ငူခေတ် ရာဇဝင်ကျမ်းဖြစ်သော မဟာရာဇဝင်ကြီး ၏ တိကျမှုကို စစ်ဆေးရန်နှင့် အသစ်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် စတင်ပြုစုခဲ့ပြီး ၁၇၉၈ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရေးသားသူ တွင်းသင်းတိုက်ဝန် မဟာစည်သ ...
မာတောဝါဒ ဆုံးမစာ ကို ရွှေကျောင်းဆရာတော် ဦးပညာ က ရေးသားခဲ့သည်။ ၁။" ရိုညွတ်ကြည်စွာ” ၊ မြတ်ဆရာ၌၊ မကွာထံပါး၊ ပျပ်ဝပ်တွားလျက်၊ တည်ကြားကျုံ့ကျုံ့၊ မယွင်းယုံ့လျှင်၊ နှုတ်တုံ့မလှန်၊ ပန်းသို့ပန်၍၊ နေဟန်ကျစ်ကျစ်၊ ကြောက်ချစ်ရိုသေ၊လုပ်ကျွေးထွေဖြင့်၊ မြုတေလျှ ...
မေတ္တာစာ ဟူသည်ကား မြန်မာစာပေတွင် လင်္ကာဖြင့် သော်၎င်း၊ လင်္ကာစကားပြေ နှစ်ထွေရော၍သော်၎င်း ရေးစပ်သီကုံးသော အဖွဲ့အနွဲ့တစ်မျိုး ဖြစ်၏။ အစပထမတွင် မေတ္တာစာများကို ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့က ဂုဏ်အားဖြင့်ကြီးသော ဘုရင်စိုးမင်းတို့အား အကြောင်းတစ်ပါးပါးကြောင့် မေတ ...
မောင်ရင်မောင် မမယ်မ ဝတ္ထုသည် မြန်မာ့စာပေဂန္ထဝင်၌ ပထမဦးဆုံးသော မြန်မာ့ကာလပေါ် ဝတ္ထုဖြစ်ပြီး စာ‌ရေးဆရာကြီး ဂျိမ်းစ်လှကျော် ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းဝတ္ထုသည် ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီး အယ်လက်ဇန္ဒား ဒျူးမား ရေးသားသော ကောင့်အော့ မွန်တီကရစ္စတို ဝတ္ထုကိုမှီငြမ်း၍ မြန ...
မော်ကွန်းဟူသော စကားသည် ပုဂံခေတ်ကပင် ရှိခဲ့သည်။ ပုဂံမြို့ လေးထောင့်ကန်အရပ် ၊ တက်နွှဲ အရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့များတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိရသော ရှေးဟောင်းကျောက်စာများတွင် အမူကွန်း တင်သော အကြောင်းအရာများကို ရေးထိုးထားသည်။ အလှူပြုသော သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ စာရင်းများက ...
မဲဇာတောင်ခြေရတု ကို လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီးက ရေးသားခဲ့သည်။ လူအမည်မှာ ဦးမြတ်စံ ဖြစ်သည်။ ရွှေဘိုနယ်၊ မန်ကျည်းတုံရွာ၌ ဖွားမြင်သည်။ အင်းဝဘုရင် ဆင်ဖြူရှင်လက်ထက်တွင် ရာဇဝတ်သင့်သည်ဆိုကာ မဲဇာအရပ်သို့ အပို့ခံခဲ့ရသည်။ မဲဇာအရပ်သည် တောတောင်ကြီးမားသောကြောင့် လူသ ...
လူတွင် အကြောပေါင်းတစ်ထောင် ရှိသည်။ မြန်မာတို့၏ အသုံးအနှုန်းတွင် ဂွမ်းဆီထိ ပီတိသောမနဿ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုခြင်းမှာ ယင်းအကြောပေါင်း တစ်ထောင်လုံး စိမ့်သွားသည့် ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပါမည်။ ပုဂံရာဇဝင်တွင် အနော်ရထာမင်းစောသည် ရှင်အရဟံ၏ တရားထူး တရားမြတ်ကို ကြားနာ ...
မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် မြန်မာ့ကာလပေါ် ဝတ္ထုဟု ခေါ်ဆိုသော စာပေမျိုးသည် လွန်ခဲ့သော အနှစ်ငါးဆယ် ကျော်ခန့်ကစ၍ ပေါ်ထွန်းလာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ရှေးအခါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇာတ်ဝတ္ထုများ ရှိခဲ့သည်။ ကာလပေါ်ဝတ္ထုသည် လူ့အကြောင်း လောကအကြောင်းကို ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ဆ ...
မြန်မာစာပေ၏ အစမူလသည် ပုဂံခေတ်စာပေဖြစ်၍ ကျောက်စာ အရေးအသား ထွန်းကားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကျောက်စာကို လေ့လာခြင်းဖြင့် မြန်မာစာပေပေါက်ဖွားစ အချိန်က အခြင်းအရာများကို သိနိုင်၏။ ကျောက်စာများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၈ဝဝ ကျော်ပုဂံကောင်းစားသည့် ခေတ်က ထွန်းကားခဲ့ ...
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် ပြာပုံအတိဖြစ်ခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံအား ပြန်လည်ထူထောင်ရန် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ပြီး ကွန်ဖရင့်တရပ်ကို ဤအဆောက်အအုံ၌ ကျင်းပခဲ့၍ စီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန် ...
ပေစာဆိုသည်မှာ ပေပင်မှရသော ပေရွက်ပေါ်တွင် အက္ခရာစာလုံးများ ရေးသောကြောင့် ပေနှင့် စာကိ တွဲ၍ ပေစာဟုခေါ်သည်။ လက်ရေးစာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများနှင့် မြန်မာစာကို ဆိုလိုသည်။ မြန်မာများ အသုံးပြုသော မြန်မာစာဖြင့ ...
မြန်မာပြည် စာအုပ်ဖြန့်ချိရေးဌာန သည် နဂါးနီ စာအုပ်တိုက်နှင့်အပြိုင် နိုင်ငံရေးစာအုပ်များ ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာ ပုံနှိပ်တိုက် ဖြစ်သည်။ ဦးထွန်းအေး ထူထောင်သည်။
ပြည်သူလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်သည့် အဖြစ်အပျက် တို့ကိုသော်လည်းကောင်း ပြည်သူလူထုအား အကျိုးသက်ရောက်စေသော၊ သို့မဟုတ် အကျိုးပျက်စေသော အဖြစ်အပျက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်တို့ကိုသော်လည်ကောင်း၊ ပြည်သူလူထု၏ အတွေးအခေါ် အနေအထိုင်၊ ယဉ်က ...
မြဝတီစာပေတိုက် သည် ရှေးခေတ်စာဆိုတော်ကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ စစ်သူကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်သော မြဝတီမင်းကြီးဦးစကိုရည်ညွှန်း၍ အခြားစာဆိုစစ်သည်တော်ကြီးများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သားများ၏ စာပေအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသ ...
ကုန်းဘောင်မင်းဆက် သတ္တမမြောက်မင်း ဖြစ်သော စစ်ကိုင်းမင်း ဘကြီးတော် လက်ထက်တွင် ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိတို့ကို ညှိုနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ရာဇဝင် တစ်ဆောင်ကို ပြုစုစေသည်။ ထိုရာဇဝင်ကြီးကို မောင်းထောင်ဆရာတော် လူထွက်ပညာရှိ အမတ်ကြီး မဟာဓမ္မသင်္ကြံအကြီးအမှူးအုပ်ချ ...
မှာတမ်း ဆိုသည်မှာ တစ်ဖက်သား၏ စိတ်နှလုံးကို ညွတ်နူး တိမ်းမက်စေလျက် မြတ်နိုးကြင်နာလာအောင် အောက်ကျို့ ချော့မော့၍ ရေးသားသော စာဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးက ရည်ငံစေရန်ပေးသောစာ ဖြစ်သည်။ မှာတမ်းကို စကားပြေ ရိုးရိုးဖြင့် ရေးသည်ထက် ဒွေးချိုး၊ လ ...
ဂင်္ဂါမာလပြဇာတ် ရေသည်ပြဇာတ် သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်းတွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော စာဆိုပညာရှိ စလေ ဦးပုည ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပြဇာတ် တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤပြဇာတ်သည် အဋ္ဌနိပါတ် တွင်ပါရှိသော ဂင်္ဂါမာလဇာတ်တော် မှထုတ်နှုတ်ရေးသားထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာ ...
အောင်ဇေယျတု၊ ကျမ်းဂန်ရှု၍၊ ဂမုဓာတ်ရ၊ ဓာတွတ္ထဖြင့်၊ ဂမနသဒ္ဒါ၊ ကြောင်းခြင်းရာကို၊ လင်္ကာကုံးသီ၊ လမ်းစဉ်စီအံ့၊ ရောင်ညီလေးဦး၊ ဖြစ်ခဲ့ထူးတွင်၊ တောင်ကျူးလက်ျာ၊ ဒက္ခိဏာဟု၊ ဒီပါကျွန်းမြတ်၊ မိုးနတ်ဣန္ဒာ၊ မြောက်မှာကျွန်းသူ၊ မတူကြငြား၊ ဘုရားမြတ်စွာ၊ စကြာစို ...
အေဒီ ခုနှစ် မြန်မာသက္ကရာဇ် ခုနှစ် နယုန်လဆုတ် ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဆင်ဖြူရှင်ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီးသည် ပုဂံ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်၌ မွန်၊ မြန်မာ၊ ပါဠိ သုံးဘာသာ ရေးထိုးထားသော ခေါင်းလောင်းကို သွန်းလုပ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ခေါင်းလောင်း၏ အရွယ်ပမာဏမှာ အမြင့ ...
၁။ ဒဂုံမွေရှင်၊ သိင်္ဂုတ်တွင်နှိုက်၊ ရှင်ပင်သစ္စာ၊ ပွင့်သောခါဝယ်၊ ခြောက်ဌာနလွန်၊ တဖန်ရက်စေ့၊ ပြည်သည့်နေ့နှိုက်၊ ကြုံတွေ့လျှင်းအောင်း၊ မြတ်ညီနောင်လျှင်၊ရည်စောင်ကြည်ဖြူ၊ ပျားဆုပ်လှူ၍၊မဉ္ဇူဆံမွေ၊ ကိုးကွယ်စေကာ၊ ထိပ်ဗွေဆောင်ရွက်၊ သည်တောင်ထက်ဝယ်၊ ကျိုက ...
ရွှေဘုံနိဒါန်း ဟူသည်မှာ မြန်မာဘုရင်များ၏ ရွှေလက်ထက်တော်အခါက မင်းခမ်းမင်းနားဆိုင်ရာ အဆောင်အယောင် အကြောင်းအရာတို့ကို ပြဆိုရာ ထီးနန်းမှတ်တမ်းကျမ်း ပင်ဖြစ်သည်။ ရွှေနန်းရွှေဘုံနှင့် စပ်လျဉ်းသော အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတို့၏ မူလအခြေအမြစ်နှင့်တကွ ဖော်ပြသော ...
စက်ဆယ့်နှစ်လီ၊ ဒွါဒသီဝယ်၊ သုံးလီဥတု၊ လက်ဝဲလုသား၊ ရတုသာစွ၊ လ မဏ္ဍလျှင်၊ သဘင်ဂိမှာန်၊ တာသင်္ကြန်ဟု၊ လေပြန်လွှင့်ကူ၊ ဘုံသစ်ထူ၍၊ ဥဏှဂူနတ်၊ ဖလ်ရဟတ်လည်း၊ သဟဿရောင်၊ ခြည်တထောင်ဖြင့်၊ ပြောင်ပြောင်ဝင်းထိန်၊ အာဏာနှိမ်လျက်၊ ပြင်းရှိန်အန္တ၊ ဂုဏ်စွမ်းပြသော်၊ လ ...
၁။ အစ်ကိုကြီးအား၊ ညီငယ်များလည်း၊ စကားနှုတ်ဆက်၊ ဖက်၍မဆို၊ ရိုသေလှစေ၊ ကိုကြီးအမ၊ သည်နှစ်ဝကို၊ မိဘကဲ့သို့၊ မှတ်ပါလေ။ ၂။ ဆွေကြီးမျိုးကြီး၊ အဘကြီးနှင့် ဦးရီးသားချင်း၊ ဘထွေးရင်းက၊ ဟူသမျှကို၊ ဂုဏဝုဍ္ဎ၊ ပစာယန၊ စိတ်ကသိစေ၊ ပြစ်မှားမိက၊ မသင့်ချေ။ ၃။ ပေါက်ဖေ ...
လင်္ကာ ဟူသည် ပါဠိစကား အလင်္ကာရ ဖြစ်၍ တန်ဆာဆင်ခြင်း အနက်ရသည်။ မိန်းမပျိုကလေး တစ်ဦးအား ရိုးရိုးဝတ်စား ဆင်ယင်သည်ထက် ပုတီး၊ လက်ကောက်၊ ခြေကျင်း၊ နားဍောင်းများကို ဆင်ထားပါက ပိုမိုကြည့်၍ ကောင်းသကဲ့သို့ စာပေတွင်လည်း ရိုးရိုးစကားလုံးများကို နားထောင်၍ကောင် ...
လောကသာရ ဆုံးမစာ ကို ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော် က ရေးသားခဲ့သည်။ ၁။ အသက်ရှည်စွာ၊ အနာမဲ့ကြောင်း၊ ကောင်းလှစေချင်၊ ပဲ့ပြင်နိစ္စ၊ ကွပ်ဆုံးမသား၊ မိဘဆရာ၊ စကားနာ၍၊ ကျမ်းစာသိမြင်၊ တတ်အောင်သင်လော့၊ ပေါ်လွင်မပြု၊ ကောင်းရာတုလျက်၊ ကောင်းမှုမြတ်နိုး၊ ကောင်းအောင် ...
၁ ကြားပိမ့်သူမြတ်၊ အများမှတ်စိမ့်၊ ဟိတတ္ထိက၊ ဩဝါဒဖြင့်၊ ဆုံးမပေးထွေ၊ နားဝင်စေလော့၊ နေသို့ထင်ရှား၊ ဘုရားတရားသင်္ဃာ၊ ရတနာထွတ်ထား၊ မြတ်သုံးပါးကို၊ ဦးပါးထိပ်ထက်၊ အမြဲရွက်၍၊ စုံမက်သဒ္ဓါ ကြည်စေမင်း။ ၂ အသက်ရှည်စွာ၊ အနာမဲ့ကြောင်း၊ ကောင်းလှစေချင်၊ ပဲ့ပြင် ...
ဝေရွှန်းစန္ဒာရတု ကို လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီး ရေးသားခဲ့ပါသည်။ မင်းပြစ်မင်းဒဏ်သင့်၍ မဲဇာအရပ်၌ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ နေရချိန်တွင် မဲဇာတောင်ခြေချီရတု နှင့် ဝေရွှန်းစန္ဒာချီရတု နှစ်ပုဒ်ကို ရေးသားသီကုံးကာ မင်းအမြတ်ပြေစိမ့်သောငှာ ဆက်သွင်းသော ရတုနှစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ...
သဒ္ဒါ ဆိုသည်မှာ ဘာသာရပ်တစ်ခု၏ စည်းကမ်း ဥပဒေသဖြစ်သည်။" မည်သို့ရေးရမည်။ အရေးအသား၊ အထားအသို၊ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ၊ ဘယ်စကားလုံးကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးစွဲရမည်” စသည်တို့ကို စည်းစနစ်ကျမှု ရှိစေရန်အတွက် သဒ္ဒါ ဟူသော ဘာသာရပ်၏ ဥပဒေသ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြ ...
သားရွှေကြူ ဆုံးမစာ ကို ကျောင်းစာရေး မောင်စံထိန် က ရေးသားခဲ့သည်။ သားရွှေကြူ” ၊ သူတော်တကား၊ ချီးမွမ်းရာသား၊ သားတကာထက်၊ ကျေးဇူးနက်၍၊ အဖက်မဲ့စွာ၊ ဂုဏ်ပညာနှင့်၊ သမ္မာစာရ၊ မြတ်ဓမ္မဖြင့်၊ မိဘတို့ထက်၊ ဆထက်လွန်စွာ၊ အတိဇာဟု၊ သမ္ဘာရင့်ညောင်း၊ သားသူကောင်းလျှ ...
သားရွှေဥ ဆုံးမစာကို စာတော်ပြင်ဆရာကြီး ဦးပညာ က ရေးသားခဲ့သည်။ ၁။" မာတာပီတ”၊ မိဘနှစ်ပါး၊ မွေးသည်သားကို၊ သနားကြင်နာ၊ တတ်ပညာဖြင့်၊ လိမ်မာစေချင်၊ ထုံးပုံဆင်၍၊ သွန်သင်ဝေဖန်၊ ဆုံးမဟန်လျှင်၊ ကျန်းဂန်အဓိပ္ပါယ်၊ သင့်ကြောင်းခြယ်လျက်၊ နာဖွယ်ဆန်းထူး၊ လင်္ကာကျူ ...
သုတမဉ္စူ ဆုံးမစာ ကို နေမျိုးမင်းထင်ကျော်ခေါင်ဘွဲ့ရ အမှာတော်ရေး ဦးရှင်ကလေး က ရေးသားခဲ့သည်။ ၁။" ကျင့်ဝတ်မြွက်ဖော်” ၊ သူတော်သဘော၊ လောကသာရ၊ ဆုံးမခဲ့ချက်၊ ဦးတင်ရွက်လော့၊ အသက်ရှည်စွာ၊ အနာမဲ့ကြောင်း၊ ကောင်းလှစေချင်၊ ပဲ့ပြင်နိစ္စ၊ ကွပ်ဆုံးမသား၊ မိဘဆရာ စက ...
သုတရတနာ ဆုံးမစာ ကို ညောင်ပင်သာ ဦးပုည က ရေးသားခဲ့သည်။ သုတရတနာသံပေါက်စာ၊ မှတ်ရာလူအမျိုး။ မှတ်သားမိသော်၊ အနှစ်ကျော်၊ ထင်ပေါ်နွမ်းမညှိုး။ မညှိုးဂုဏ်ရောင်၊ ဝင်းထိန်ပြောင်၊ လူ့ဘောင်ကဲမြင့်ဖြိုး။ မီးရောင်၊ လရောင်၊ နေအရောင်၊ ဉာဏ်ရောင်လွှမ်း၍မိုး။ ပညာသမာ၊ ...
ကကခုန်ခုန်၊ ကချော်ကချွတ်၊ ကစဲကရဲ၊ ကစဉ့်ကရဲ၊ ကဇစ်ကရစ်၊ ကတောကမြော၊ ကတိမ်းကပါး၊ ကတုန်ကရင်၊ ကတိုက်ကရိုက်၊ ကနွဲ့ကယ၊ ကပေကရေ၊ ကပေါက်ကရောက်၊ ကပိုကရို၊ ကပျက်ကချော်၊ ကဗျာကရာ၊ ကဗျာကသီ၊ ကမန်းကတန်း၊ ကရော်ကမယ်၊ ကရောက်ကရက်၊ ကလီကမာ၊ ကလေကခြေ၊ ကလေကဝ၊ ကလေးကလား၊ ကလန ...
ခခယယ၊ ခခယမ်းယမ်း၊ ခနိုးခနဲ့၊ ခမီးခမက်၊ ခလုပ်ကန်သင်း၊ ခဲခဲကြိတ်ကြိတ်၊ ခဲခဲမဲမဲ၊ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း၊ ခေါ်ခေါ်ပြောပြော၊ ခက်ခက်ခဲခဲ၊ ခင်ခင်မင်မင်၊ ခန့်ခန့်ညားညား၊ ခုတ်ခုတ်ထွင်ထွင်၊ ခုံခုံမင်မင်၊ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့၊ ခိုင်ခိုင်မတ်မတ်၊ ခိုခိုကပ်ကပ်၊ ခိုးခိုးခေါ ...
အာသံနိုင်မော်ကွန်းကို ဘိုးတော်ဘုရား၊ ဘကြီးတော်ဘုရား၊ ရွှေဘိုမင်းတို့ လက်ထက် ချီးမြှင့် သူကောင်းပြုခံရသော ပညာရှိ ဝက်မစွတ်မြို့စား နဝဒေး စီကုန်းရေးသားသည်။ ၎င်းရေးသားသော အခြားသော မော်ကွန်းများကဲ့သို့ နိဂုံးချုပ်သံပိုင် ပါဝင်သော်လည်း မည်သည့်ခုနှစ်တွင ...
၁။ ပညာရှိကိုပေါင်း၊ သမားကောင်းကိုဖက်၊ သူပျက်ကိုခွာ၊ ဆရာကိုကပ်၊ အရပ်ကိုမျှ၊ လုံ့လအပင်၊ ဆင်ခြင်အမျက်၊ ရန်ဘက်ကိုမြော်၊ သူတော်ကိုချစ်၊ ခင်ပွန်းပစ်ကိုရှောင်၊ သူလောင်ကိုရွှေ့၊ ဆင်ဝှေ့ကိုချည်၊ ကြံစည်မပျက်၊ အတတ်ရံခါ၊ ပညာကိုရှေး၊ ဥစ္စာကိုနောက်၊ အလျောက်ပေး ...
ဆရာမှာခဲ့မည်၊ တပည့်ငယ်အများတို့၊ ငါ ဆရာ့စကားကို စေ့စေ့နားထောင်လေ။ မသေသမျှ ကာလအတွင်းတွင် ဖျင်းတန်ပေါ့သွပ်သောသူကို မပေါင်းနှင့်။ လောင်းစားသေစာမှုကို ဝေးအောင်ကြဉ်။ ဆရာသခင်၊ အရှင်နှစ်ပါး၊ မိဘများကို၊ မုန်းထားမာန်မျက်၍၊ စိတ်ထွက်အောင်မပြုနှင့်။ သူ့ကျေး ...
၄၀။ ကြားပိမ့်မင်္ဂလာ ၊ နိဂုံးမှာပိမ့်၊ ရတနာပု၊ အဝပြည်ကြီး၊ ဟံသာမီးကြောင့်၊ ပျက်စီးသည့်နောင်၊ ထွန်းတန်ဆောင်သို့၊ ကုန်းဘောင်သမိုက်၊ ထီးနန်းစိုက်က၊ အတိုက်တိုက်သား၊ သတင်းနားမျှ၊ မကြားဝံ့ကြ၊ ဦးညွတ်ခသည်၊ သိင်္ဃရတနာ၊ အာဒိသမိုက်၊ ဗျာဒိတ်သိုက်ဝင်၊ ဆင်ဖြူရ ...
ဇာစ်မြစ် ဝတ္ထုကို အာဖရိကန်-အမေရိကန် စာရေးဆရာ အဲလက် ဟာလီ ရေးသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဒက်ဘယ်ဒေးပုံနှိပ်တိုက်မှ စတင်ထုတ်ဝေသည်။ ၁၈ ရာစု အာဖရိကန်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကွန်တာ ကင်တီ အား အမေရိကသို့ ကျွန်အဖြစ် ပို့ဆောင်လိုက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ...
ပရိယတ္တိ သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Onalaska တွင် တည်ရှိသည့် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်မယူသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် စာအုပ်များထုတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း၊ တရားဓမ္မများသင်ကြားမှု မီဒီယာများတွင် ကူညီခြင်း စသည် ...
သို့. ကျွန်မကြိုက်ဖူးတဲ့ ကောင်လေးများ
သို့. ကျွန်မကြိုက်ဖူးတဲ့ ကောင်လေးများ သည် အမေရိကန် စာရေးဆရာမ ဂျန်နီဟန် ရေးသားသည့် လူငယ်ကြိုက် အချစ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခု၊ ဧပြီ ၁၅ ရက်တွင် ဆိုင်မွန်အင်ရှုစတာ စာအုပ်တိုက်မှ ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။ နောက်ဆက်တွဲနှစ်အုပ်ဖြစ်သော "မှတ်ချက်. နင့်ကို ခ ...
သင်္ကသရိုက် စာပေသည် ဘီစီဒုတိယထောင်စုနှစ် မှစ၍ Sanskrit ဘာသာစကား ဖြင့်ရေးသောစာသားများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထင်ရှားသောစာသားများစွာသည် အိန္ဒိယဘာသာ များဖြစ်သော ဟိန္ဒူဘာသာ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဂျိန်းဝါဒ တို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး ရှေးဟောင်းအိန္ဒိယတွင် ရေးစပ်ထ ...
ရွှမ်းရှီ သည် ပျော်ရွှင်မှု နှစ်ထပ်ကွမ်းဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရာတွင် အသုံးပြုကြသည့် တရုတ်ရိုးရာ အလှဆင် ဒီဇိုင်းစာလုံးဖြစ်သည်။
2gether: The Series (ထိုင်း ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ)
2gether: The Series သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ထိုင်း ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပြီး Metawin "Win" Opas-iamkajorn နှင့် Vachirawit "Bright" Chiva-aree တို့မှာ ဇာတ်‌ဆောင်များ ဖြစ်သည်။ JittiRain ရေးသားသော ၂၀၁၉ ထွက် နာမည်တူ ဝတ္ထုကို ပုံ‌ဖော် ရိုက်ကူးခြင်း ဖြစ်သည် ...
F4 Thailand: Boys Over Flowers သည် Tontawan Tantivejakul ၊ Vachirawit Chiva-aree ၊ Jirawat Sutivanisak ၊ Metawin Opas-iamkajorn နှင့် Hirunkit Changkham တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၂၁ တွင် ထွက်ရှိလာမည့် ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ ...
Fabulous 30: The Series သည် ၂၀၁၁ ရုပ်ရှင် Fabulous 30 ကို ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ပြန်လည်ပုံဖော်ပြီး Preechaya Pongthananikorn နှင့် Tanutchai Wijitwongthong တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၇–၂၀၁၈ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ GMMTV က ထုတ်လုပ်သော ဤ ဇ ...
အမျိုးသမီးတို့ ထကြလော့: အလွန်ရှုပ်ထွေ ..
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ် ..
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့ အသိအမှတ်ပြ ..